Otu ihe na-eme mmadụ niile (1-3)
Kporie ndụ n’agbanyeghị na mmadụ na-anwụ anwụ (4-12)
Ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla (5)
E nweghị ihe mmadụ nwere ike ime n’ili (10)
Oge ọjọọ na ihe ndị a na-atụghị anya ha (11)
A naghị eji amamihe akpọrọ ihe mgbe niile (13-18)
9 M chebaara ihe a niile echiche wee kwuo na ndị ezi omume na ndị ma ihe nakwa ọrụ ha na-arụ dị n’aka ezi Chineke.+ Ndị mmadụ amaghị otú ndị dịrị ndụ tupu hanwa hụruru ibe ha n’anya nakwa otú ha kpọruru ibe ha asị. 2 Ọ bụ otu ihe na-eme* mmadụ niile,+ ma onye ezi omume ma onye ajọ omume,+ ma ezigbo mmadụ ma onye dị nsọ ma onye na-adịghị nsọ, ma ndị na-achụ àjà ma ndị na-anaghị achụ àjà. Otú ọ dị ezigbo mmadụ ka ọ dị onye mmehie. Otú ọ dị onye na-aṅụ iyi ka ọ dịkwa onye na-anaghị achọ ịṅụ iyi. 3 Ihe a bụ ihe na-agbawa obi nke na-eme n’ụwa:* Ebe ọ bụ otu ihe na-eme* mmadụ niile,+ ihe juru n’obi ndị mmadụ bụ ihe ọjọọ. Ihe dị ha n’obi n’oge ha dị ndụ bụ nzuzu, ha na-emechakwa nwụọ. 4 Onye ọ bụla dị ndụ nwere olileanya, n’ihi na nkịta dị ndụ ka ọdụm nwụrụ anwụ mma.+ 5 N’ihi na ndị dị ndụ ma na ha ga-anwụ,+ ma ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla.+ E nweghị ụgwọ ọrụ ọzọ ha nwere, n’ihi na e chefuola ihe niile banyere ha.+ 6 Ha enweghịkwa ike ịhụ mmadụ n’anya ma ọ bụ ịkpọ mmadụ asị ma ọ bụ imere mmadụ anyaụfụ. E nweghịzi ihe a na-eme n’ụwa* ha so eme.+ 7 Gaa jiri obi ụtọ rie nri gị, jirikwa obi ụtọ ṅụọ mmanya gị,+ maka na ọrụ gị dị ezi Chineke mma.+ 8 Ka uwe gị na-enwu gbaa* mgbe niile, ka mmanụ gharakwa ịkọ n’isi gị.+ 9 Ka gị na nwunye gị ị hụrụ n’anya+ kporie ndụ n’ụbọchị niile na-enweghị isi Chineke mere ka ị dị ndụ n’ụwa,* bụ́ ụbọchị niile na-enweghị isi ị dị ndụ, n’ihi na ọ bụ ihe i ketara ná ndụ, bụrụkwa ụgwọ ọrụ gị maka ọrụ ị na-arụsi ike n’ụwa.*+ 10 Ihe ọ bụla i nwere ike ime, jiri ike gị niile mee ya, n’ihi na i nweghị ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ ime atụmatụ ma ọ bụ ịmụta ihe ma ọ bụ ịma ihe n’ili,*+ bụ́ ebe ị na-aga. 11 Ihe ọzọ m hụrụ nke na-eme n’ụwa* bụ na ọ bụghị mgbe niile ka ndị nwere ụkwụ ọsọ na-emeri n’ọsọ. Ọ bụghị mgbe niile ka ndị dike na-emeri n’agha.+ Ọ bụghị mgbe niile ka ndị ma ihe na-enweta ihe oriri. Ọ bụghị mgbe niile ka ndị ụbụrụ na-aghọ nkọ na-akpata akụnụba.+ Ọ bụghịkwa ndị mụtara ihe ka ihe na-agaziri mgbe niile,+ n’ihi na ọdachi* na-abịara ha niile n’oge a na-atụghị anya ya. 12 N’ihi na mmadụ amaghị oge ihe ọjọọ ga-abịara ya.+ Otú ahụ ụgbụ si ejide azụ̀, ọnyà ana-amakwa nnụnụ, ka mmadụ si abanye ná nsogbu n’oge ọdachi dakwasịrị ya, mgbe ọ dakwasịrị ya na mberede. 13 E nwekwara ihe m hụrụ n’ụwa* gbasara amamihe. Ihe a masịrị m: 14 E nwere otu obere obodo mmadụ ole na ole bi na ya. Otu eze siri ike bịara iluso obodo a ọgụ. Ọ gbara ya gburugburu ma rụọ mgbidi dị elu ọ ga-eji nọchibido ya. 15 E nwere otu nwoke ma ihe bi n’obodo a, ma ọ bụ ogbenye. O ji amamihe o nwere napụta obodo a. Ma e nweghị onye chetara ogbenye a.+ 16 M gwaziri onwe m, sị: ‘Mmadụ ịma ihe dị mma karịa mmadụ isi ike.+ Ma a naghị eji amamihe ogbenye akpọrọ ihe, a naghịkwa eme ihe o kwuru.’+ 17 Ọ ka mma mmadụ ime ihe onye ma ihe weturu obi kwuo kama ime ihe onye na-achị ndị nzuzu tiri ná mkpu. 18 Amamihe ka ngwá agha mma, ma naanị otu onye mmehie nwere ike imebi ọtụtụ ihe ọma.+
^ Ya bụ, uwe chapụrụ achapụ nke na-egosi na obi dị onye yi ya ụtọ, ọ bụghị uwe e ji eru uju.
^ Ma ọ bụ “ihe mberede.”